रोचक Archives - Page2of 16 - Samudrapari.com
काठमाडौं - ६ वर्षका अमेरिकन बालकले काम गरेर १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कमाएका छन् भन्दा कमैलाई विश्वास लाग्न सक्छ । तर, अमेरिकामा आफ्नो आमाबाबुसँग बसिरहेका रेयान नाम गरेका ६ वर्षीया बालकले ‘यूट्युब च्यानल’मा खेलौनाहरुको समीक्षा गरेर अहिलेसम्म ११ मिलियन डलर (करिव १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ) कमाइसकेका छन् । ती बालकले बजारमा आएका नयाँ खेलौनाहरुको समीक्षा गरिएको भिडियोहरु उनको ‘यूट्युब च्यानल’मा अहिलेसम्म करौडौं मानिसहरुले हेरिसकेका छन् । उनले ‘रेयान टोयजरिव्यू’ नामक ‘यूट्यूब च्यानल’ चलाउँछन...
काठमाडौं – प्रशान्त महासागरको दक्षिणी क्षेत्रमा ज्वालामुखि विस्पोटपछि एउटा द्वीप बनेको छ । सुरुमा वैज्ञानिकले यो द्वीपको संरचना केहि महिनामात्र रहने बताएका थिए । तर यो द्वीप बनेको ३० वर्ष भइसक्यो । सबैभन्दा चाखलाग्दो कुरा के हो भने वैज्ञानिकलाई यो द्वीपको संरचना मंगल ग्रहमा देखिएको द्वीपसँग मिलेको जस्तो लाग्छ । त्यसैले वैज्ञानिकहरु मंगलग्रहसँग जोडिएका रहस्यहरु पत्ता लगाउन सहयोग हुने संभावना रहेको बताउछन् ।
काठमाडौं – चिया नेपाली समाजको जीवनशैली नै हो । अधिकांशले चिया भन्नेबित्तिकै दूधलाई छुटाउन नहुने सम्झन्छन् । स्वादका कारण पनि निकै कमले मात्र कालो चियाको प्रयोग गर्छन् । तर, दूध चियाको अत्यधिक प्रयोग स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्छ । कालो चिया भने निकै उपयोगी । कालो चियाले शरीरलाई स्वस्थ राख्नुका साथै क्यान्सरजस्तो रोगबाट समेत जोगाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । यी हुन्, कालो चियाका पाँच फाइदा : तौल मेन्टेन कालो चियामा भएको एन्टिअक्सिडेन्ट्सले शरीरमा भएको बोसोलाई कम गर्ने काम गर्छ । जसको परिणाम ...
काठमाडौं – लक्ष्य पूरा गर्न अहोरात्र लाग्दा सधैँ सफलता मिल्दैन । असफल हुँदा बेखुसी हुने आम बानी हुन्छ । त्यसैले त अधिकांश व्यक्ति नकारात्मक सोचको चक्करमा फसिरहन्छन् । नकारात्मक सोच मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ । अब, खुसी हुने कला सिक्नुहोस् : -‘सोचाइ, परिवेश, वातावरणअनुसार सोच्ने तरिका फरक–फरक हुन्छन् । सोचाइअनुसार नै जिन्दगी जिउने बानीको विकास हुन्छ । त्यसैले, सकेसम्म सकारात्मक मात्र सोच्ने बानी बसाल्नुुपर्छ । नकारात्मक सोचाइ आइहाले पनि तुरुन्त सकारात्मक शब्दले भर्नु राम्रो ह...
काठमाडौं - भनिन्छ रिसले आफैलाई खान्छ । हामीलाई यो कुराको थाहा नै हुँदैन की हाम्रो दैनिक जिवनका स-साना बानीहरु पनि मृत्युको कारण बन्न सक्छन् । अमेरिकी वैज्ञानिकहरुको अनुसन्धानले धेरै रिस उठ्ने मानिसहरुको मृत्यु छिटो हुने गरेको पुष्टि गरेको छ । आइवा स्टेट विश्वविद्यालय मा गरिएको एक अनुसन्धान अनुसार नरिसाउने मानिसको तुलनामा धेरै रिस उठ्ने मानिसको अकाल मृत्युको खतरा डेढ गुणा बढी हुने गरेको भेटाएको छ । रिसका कारणले गर्दा मानिसको शरीरमा विभिन्न खाले खतरनाक परिवर्तन आउँछन , जसमा तनावदेखि लिएर मनोरोग...
काठमाडौं – अनिद्राको समस्या भएका मानिसले नराम्रा सपना देख्छन् । यस्तो अवस्थामा केही क्षणका लागि श्वासप्रश्वासमा पनि समस्या आउन सक्छ । नियमित नराम्रा सपना देख्नु मुटुको समस्यासँग पनि गाँसिएको हुन्छ । केही समयअघि अनुसन्धानकर्ताले बाल्यकालमा नियमित नराम्रा सपना देख्ने व्यक्तिमा पछि गएर मानसिक समस्या देखिने बताएका थिए । एक अध्ययनपछि उनीहरूको प्रतिवेदन ‘स्लिप’ नामक जर्नलमा प्रकाशित गरिएको थियो । बारम्बारका नराम्रा सपनाका कारण बालबालिकाले भावनात्मक चोटको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्ने अनुसन्धानकर...
काठमाडाैं - एक पटक हिसाव गर्नुस् त, एउटा खरबुजाका लागि कति मूल्य चुकाउनु पर्ला ? उता अमेरिकामा चाहीँ एउटा पसलेले एउटा खरबुजाका लागि ८० करोड रुपैयाँ मूल्य चुकाएका छन् । अमेरिकाको अलाबामास्थित शपिङ स्टोर वालमार्टका लागि एउटा खरबुजाको मूल्य ८० करोड परेको हो । घटनाको सुरुवात २ वर्षअघि भएको थियो । सन् २०१५ मा भएको उक्त घटनाका विषयमा अमेरिकी प्रान्त अलबामाको एक अदालतले हालै फैसला सुनाएको छ । अदालतको फैसला अनुसार अब वालमार्टले खरबुजाका कारण घाइते भएका ग्राहक हेनरी वाकरलाई ७५ लाख डलर अर्थात् झण्डै ८५...
काठमाडौं – धेरै नेपालीले बिहेका लागि मंसिर महिना कुरेर बसेका हुन्छन् । यसै पनि मंसिर लगनको महिना हो । मंसिर सुरु भएसँगै प्रत्येक दिन नवजोडीका फोटोले ‘फेसबुक वाल’ रंगिइरहेका छन् । उसो भए बिहेपछिको जीवन कसरी खुसी र मजबुत बनाउने त ? एक सामग्री : -जीवनभरि साथ दिने भन्दै विवाह गरिन्छ । त्यसैले विवाहपछिको जीवनलाई सुखद बनाउनका लागि एकले अर्कालाई बढीभन्दा बढी समय दिन आवश्यक हुन्छ । पति–पत्नीले एक–अर्कासँग बिताएको समयले एक–अर्कामा खुसीको सञ्चार गर्छ । -विवाहपछि विभिन्न समस्या आउन सक्छन् । र, त...
काठमाडौं – मानिस आफूलाई बिहानदेखि बेलुकीसम्म व्यस्त बनाउन चाहन्छ । व्यस्त दैनिकीले मानिसलाई तनावको वातावरण सिर्जना गर्छ । उसो त घरायसी समस्या, कुनै व्यक्तिसँगको झगडालगायतका कुराले पनि तनाव थप्न सक्छ । तर, तपाईं बिहानको समय कसरी बिताउनुहुन्छ भन्ने कुराले पूरै दिनमा हुने तपाईंको गतिविधिलाई प्रभावित पार्छ । जीवनलाई तनावबाट टाढा राख्नका लागि दिनको सुरुवात यसरी गर्न सकिन्छ : प्रकाशको सम्पर्क बिहान सबेरै उठेर ढोका खुला गर्ने । त्यसले तपाईंको कोठा मात्र होइन, मन पनि उज्यालो बनाइदिन्छ । तपाईं बिह...
काठमाडौं - विज्ञान जगतमा हरेक दिन केही न केही नयाँ कुराको आविष्कार भैरहेको हुन्छ । यसपटक वैज्ञानिकहरुले यस्तो विषय आविष्कार गरेका छन् जसले मानव इतिहास र सभ्यतामा नयाँ मोड खडा गरिदिनेछ । वैज्ञानिकहरुले चन्द्रमामा बच्चा जन्माउने नयाँ योजना तय गरेका छन् । चन्द्रमामा समेत मानिसको शुक्रकिट संग्रह गरी चन्द्रमामै बच्चा पैदा गर्ने योजना उनीहरुको छ । यहीँ क्रममा जापानी वैज्ञानिकहरुले अन्तरीक्षको वातावरणका संग्रहित गरिएको मुसाको शुक्रकिटबाट स्वस्थ मुसा पैदा गर्न सफल भएका छन् । यसबाट वैज्ञानिकहरुले प...